Qorrax Madoobaad Ka Dhacay Mareykanka
Mike Newchurch, left, professor of atmospheric chemistry at the University of Alabama in Huntsville, and graduate student Paula Tucker prepare a weather balloon before releasing it to perform research during the solar eclipse, Aug. 21, 2017, on the Orchar
Malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa daawaday qorrax madoobaad dhif iyo nadir ah oo Isniitnii shalay aheyd mugdi ka dhigay gobollada dhaca badweynta Baasifiga ilaa gobolada ku teedsan badda atlantiga marki ugu horreysay muddo 99 sano ah.
Qorrax madoobaadka ayaa barqadii hore ee shalay ka bilowday gobolka Oregon ee galbeedka Mareykanka, halkaasoo markiiba heer kulka uu si xowli ah hoos ugu dhacay, kadib marki uu dayaxa daboolay qorraxda.
Dad lagu qiyaasay 200 oo milyan oo Mareykan ah ayaa iyagoo xiran ookiyaalo khaas ah si weyn u daawaday. Daqiiqado kooban gudahood ayey qaraxdu ka madoobaatay kasoo bilow gobolka Oregon ee xeebaha galbeed ee baasifiga, gobolada ku yaalla bartamaha ilaa laga soo gaaro xeebaha bari ee Atlaantiga gaar ahaan gobolka South Carolina.
Hey’ada Mareykanka ugu qaabilsan Duulimaadka Sare iyo Dayaxa ee loo soo gaabiyo NASA ayaa todobaad ka hor uga digtay dadka inaysan si toos ah u eegin qorraxda marka ay madoobaado, sidaasi daraadeed ayey dadku ahaayeen kuwo xiran ookiyaalaha ama miyaaradaha ka hortaga ileyska qorraxda, dadka qaar ayaa heystay doobiro ama telescopes halka kuwo kalana ay wateen kaamirooyin.
Dadki sugi la,aa inay goob joog u noqdaan qorrax madoobaadkan taariikhiga ahaa waxaa ka mid ah Gregg Tolland oo kasoo safray degmada Palatine ee gobolka Illinois isla markaana ka mid noqday kumanaan isugu soo baxay banaanka eraboorka magaalada Oerryvile ee gobolka Missouri.
Nasa waxay sheegtay in qoraxmadoobaadki Isniinti shalay ka dhacay Mareykanka uu ahaa kii loogu daawashada badnaa taariikhda.
Si kastaba ha ahaatee, qorax madoobaadki shalay ayaa ka dhacay 48 gobol oo ka mid ah 50 gobol ee uu Mareykanka ka koobanyahay iyo magaalada Washington DC. Waxana ay aheyd marki ugu horreysay muddo 99 sano ah oo ay qorrax madoobaad noocaani oo kala ah uu ka dhaco dalka MAreykanka.